EPL: Man City oo garoonkeeda Etihad barbaro kula gashay Middlesbrough iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Man City oo garoonkeeda Etihad barbaro kula gashay Middlesbrough iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO
(Manchester) 05 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa barbaro 1-1 la dhaafi waysay Middlesbrough oo marti u ahayd kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana hoggaanka horyaalka ay KMG ugu qabatay hal dhibic oo qura.
Man City ayaa dhan kasta kaga fiicnayd qeybta hore kooxda Middlesbrough, taasoo keentay inay isla qeybta horeba gool ka dhaliyaan, waxaana goolka furitaanka ciyaarta ka dhaliyey Middlesbrough Sergio Aguero kaddib markii uu dhammaystiray karoos uu dadab ka soo qaaday 43’daqiiqo Kevin de Bruyne, sidaas ayaana lagu kala nastay Man City oo 1-0 ku hoggaaminaysay kooxda martida ahayd ee Middlesbrough.
Sergio Agüero ayaa goolkaasi waxa uu ahaa goolkiisii 150-aad oo uu u dhaliyo kooxdiisa Manchester City kaliya 223 kulan oo uu u ciyaaray.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Middlesbrough ayaa u muuqatay mid hurdada ka soo toostay oo kubadda la qaysatay Man City, waxaana dhammaadkii ciyaarta karoos uu soo qaaday George Friend madax ugu dhaliyey Middlesbrough xiddigeeda Marten De Roon kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Man City oo sidaas labo dhibcood ku lumisay kulankan ayaa hal dhibic oo qura si ku meel gaar ah hoggaanka ugu qabatay horyaalka Premier League.
Natiijooyinka kulamadii kale ee maanta la ciyaaray Premier League:-
AFC Bournemouth 1 – 2 Sunderland
Luis Enrique oo ka hadlay suuqa kala iibsiga ee janaayo